Qof kasta oo jecel dhimis iyo dalabyada . Yaan jeclaan lahaa in aad hesho wax la mid ah qiimo dhimis? Guud ahaan, dadka sida heshiisyo.
Hadda halkan waa war wanaagsan dadka isticmaala Spotify. Dadka dareemaan in eedeeyay Times yihiin waxoogaa sare, laakiin weli diyaar u ah inay soo iibsato kuwa adeegyada hadda waxay noqon kartaa ugu faraxsanahay, maxaa yeelay waxa aad doonaysid in aad aragto waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah dalabyada aad heli karto qiyaastii in ku siin lahaa fursad si aad u hesho adeegyadan at a qiimaha hoose ama aad hesho qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa bonus oo ay la socdaan.
Qaybta 1.Sites u Heshiisyada Spotify
Codes promo Qaybta 2.Spotify iyo codes dhimis
Qaybta 1. Goobaha loogu Heshiisyada Spotify
Links Qaar ka mid ah halkaas oo aad ka heli karto heshiisyo xiiso leh iyo dalabyada
Halkan waxaa ku qoran liiska yar oo heshiisyo la heli karo iyo bixisaa laga heli karaa 'Savingstory.com'
Sharci ah ee Maraykanka
Ardayda waxay bixiyaan Under ardayda dalab this laga yaabaa in aad hesho 50% ee lacagta joogtada ah ee caymiska.
Special dalab (ku xaddidan muddo dalab) Waxaa laga yaabaa inaad ka heli Times ah 3 bil ee 0.99 $
Hadiyado Free Waa dalab xadidan muddo sax ah A.villa 10 July 2015. User laga yaabaa hadiyado lacag la'aan ah hesho oo ay la socoto lambarka
Sharci ah ee UK
Heshiisyo Spotify UK u July sharci ah July oo dhan, dadka isticmaala isticmaali kartaa furaha promo ugu ciyaaro heeso dhakhso iyo badbaadin music qalabka ay u isticmaalaan adeegga offline ah. Sidoo kale dalab waxa aad ku raaxaysan karaan waayo-aragnimo ad-free ah kula Spotify.
£ 9.99 / bil ka dib markii premium lacag la'aan ah Now 60 maalmood iyada oo tani aad ku raaxaysato laga yaabaa 60 maalmood oo lacag la'aan ah Spotify, waxay ka dhigan tahay ma kharash badan oo ku saabsan Spotify u 2months.
Dalabyo Gaarka ah kala saxiixday Up on Spotify iyo Dhegayso songs on Your Desktop iyo Laptop ah ee Free. Wuxuu dhacayaa 10 July 2015 (aad u degdegay oo aan jeclaan lahaa in aan ka maqnaan dalab this)
Spotify on music Playstation Maxaa dhacaya haddii aad heli karto si aad u dhegaysato kuwan raadkaygay music Spotify aad Playstation music? Haddaba kanu waa weyn dalab.
Spotify premium € 5 on Bixiso Marka Aad dalab Tani waa diyaar u ah dhammaan dadka isticmaala Vodafone. Tani pack madadaalada bil kasta waa heshiis weyn. http://www.promopro.co.uk/online-vouchers-tagged-with-Spotify-22491.html?promoid=1364711 halkan waxaad ka heli kartaa macluumaadka caymiska Spotify iyo 500 MB free at kaliya € 5 bil kasta. Hadda oo ay qaar ka mid ah dalab kulul ma aad iska indho tiri karno.
6 bil maxkamad la'aan u ah dadka isticmaala qaran Tani waa war weyn u macaamiishu qaran. Iyadoo qaran waxaad heli kartaa 6 bilood ku kordhiyay Spotify pack xubin ka tirsan qoyska ama maxkamad 3 bil isticmaalka a bilaash macaamiisha qaran oo dhan. Waa dalab muddo xadidan oo laga heli karo gobolada xulay oo keliya. http://www.retailmenot.com/view/spotify.com
40% saaray oo dhan gadashada (ku xaddidan dalab muddo)
Qaybta 2. codes promo Spotify iyo codes dhimis
qaar ka mid waxtar leh codes promo iyo rasiidh ka shaqeeya oo laga yaabo on LinkedIn
Xidhid Free --- promo code: gZLHWShJPt
40% off on iibsiga ---- promo code: dhawaynayaa
6 bilood music free ----- code promo: tritiumyu
Abaalmarinta 1month free la code caffreys ---- promo: zCTplW8Uer
Spotify yeedhi code ------ code promo: ceUyNdYtXFCPUpo
60 maalin tijaabo pack ---- promo code: 080588
Xidhid 3 bilood 0.99 $
Links Kuwani lama siinin ujeeddo kasta dhiirrigelin, si sugida dalabyo, kuwaas oo aan la qaadin.
Qaar ka mid ah dalabyada laga yaabaa in aanay sax ah ee gobolkaaga ama waxaa laga yaabaa in ay ku dhacay, fadlan sax ahaanshaha hor inta aadan isticmaalin rasiidh ah.
Waxaa jira qaar ka mid ah dalabyo gaar ah soo dukaamada iyo xadidan oo ay macaamiishu. Bal eeg hareeraha waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah. Users ee qaran ka heli kartaa dalab si joogto ah kor ugu socda, laakiin waxay ku dhab ah ugu dhakhsaha badan, ugu dhaqso badan isticmaalaan oo wuxuu ku raaxaysan music si buuxda ula app looga cabsado oo loo abuuray in ay soo music nool in gees kasta.
Qaybta 3. Download Spotify music free la TunesGo
> Resource > Spotify > Talooyin Heshiisyada Spotify